သတင်း - Ningbo Zhenhai Yitong စက်ယန္တရား စက်ရုံ
CNC စက်ယန္တရား ညွှန်ကြားချက်
The CNC ခေါင်မိုး အစာကျွေး စက်ယန္တရား လမ်းကြောင်း ဟုတ်တယ် က လမ်းကြောင်း မှ က ရန်ol ကို အမှတ် (သို့မဟုတ် က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ် ၏ က စက် ရန်ol ကို) ရန် က အမှတ် ဘယ်မှာလဲ က ပြန်လည်ရောက်ရှိ နှင့် အဆုံးသတ် က စက်ယန္တရား ဖြစ်စဉ်, အပါအဝင် က ဖြတ်တောက်ခြင်း လမ်းကြောင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း ရန်ol ကိုs. ဗလာ ခရီးသွား လမ်းကြောင်း.
ဘယ်လိုလဲ ရန် သွေးခွဲ က စက်ယန္တရား ဖြစ်စဉ်ကို?
In အကျဉ်းချုပ်, က ဌာနခွဲ လုပ်ငန်းစဉ် မဖြစ်မနေ ဖြစ်လိမ့်မည် အခြေခံ အပေါ် က ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် စက်ယန္တရား ၏ က အပိုင်း က functiအပေါ် ၏ က စက် ကိရိယာ က ပမာဏ ၏ CNC စက်ယန္တရား ၏ က အပိုင်း က numဖြစ်လိမ့်မည်r ၏ ယူနစ် နှင့် က productiအပေါ် organizatiအပေါ်.
အလုပ် နိယာမ ၏ တိကျ CNC စက်ယန္တရား
The လုပ်ဆောင်နေသည် ၏ မျိုးစုံ ခြေလှမ်းများ ဟုတ်တယ် ဖျော်ဖြေ အပေါ် မျိုးစုံ မျက်နှာများ ၏ က လက်ရာ in ဆက်တိုက်။
ဇာတ်ကောင်များ ၏ ဝင်ရိုးလေး စက်ယန္တရား
ဝင်ရိုးလေး စက်ယန္တရား အင်္ဂါရပ်များ The ဝင်ရိုးလေး စက်ယန္တရား စင်တာ ဟုတ်တယ် ပထမ လျှောက်ထားခဲ့သည် ရန် က စက်ယန္တရား ၏ ကွေး မျက်နှာပြင်များ, အမည်ရ က စက်ယန္တရား ၏ ဓါးသွား။
CNC စက်ယန္တရား အများအပြား အခြေခံမူ?
In က စက်ယန္တရား ၏ CNC laကs, က ပြဌာန်းခွင့် ၏ က လုပ်ဆောင်နေသည် လမ်းကြောင်း ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း က အောက်ပါ အခြေခံမူ။
နိဒါန်း ရန် CNC စက်ယန္တရား
CNC ခတ် လုပ်နိုင် ဖြစ်လိမ့်မည် အသုံးပြုခံ့ ရန် စက် ရှုပ်ထွေးသော rotary ပုံစံ။